Xog Qarsoodi ah ..Kim Jong-un Waa Fiicanyahay Farna Ma Xanuunin | Xaqiiqonews
Xog Qarsoodi ah ..Kim Jong-un Waa Fiicanyahay Farna Ma Xanuunin
Sarkaal ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay tv-ga Fox news in Kim Jong-un xaaladiisu ay tahay mid dagan
Chung-in Moon oo ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee K. Kuunfureed ayaa yiri “go’aankeenu waa mid sal leh” isagoo Fox news u sheegay in ay haayaan xog sheegeysa in Kim Jong-un uu ku sugan yahay xaalad fiican.
Sarkaalka hadlay ayaa xaqiijyey in Kim Jog-un uu dhawaan ku sugnaa deegaanka Wonsan 13 bishan April ee aynu ku jirno.
Warbaahinta Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koondureed ayaa tabiyey in Kim Jong-un uu dhintay ama ugu yaraan uu yahay “jirraaq”, ka dib markii hogaamiyahani laga waayey xaflad loogu dabaal dagaayey hogaamiyhii aasasay Kuuriyada Waqooyi.
Warbaahinta K. Kuundureed ayaa horay u tabisay in Kim Jong-un uu galay qaliin xagga wadnaha ah, isla markaaana uu soo bogsanaayey.
Hogaamiyaha K. Waqooyi Kim Jong-un ayaa saaxadda laga waayey tan iyo wixii ka dambeeyey 11 bisha April.
Halkani riix..Si aad U Aragro Wararka muhiimka ah ee Bogga hore